FANDAHARAM-POTOANA HANOVàNA NY FEO AO AMIN'NY MIKRô - MIFIDY PROGRAMA IRAY - 2019
Fandaharan'asa hanovàna ny feo rehefa miresaka amin'ny Internet
Ny fampiharana ankehitriny dia mamela anao hanao zavatra maro samihafa. Ny iray amin'ireo ohatra mazava indrindra dia programa miovaova feo. Mamela azy ireo hanova ny feo mivantana rehefa miresaka amin'ny fangatahana fifandraisana amin'ny feo sy lalao. Amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia afaka milalao saka amin'ny namana ianao na manandratra ny feonao araka izay tianao.
Ny fototry ny fanovàna feo dia ny manangana na mampidina ny haavony ary manitsy ny feo. Maro ireo fitaovana rindrambaiko natao hamahana olana toy izany no misy endri-javatra fanampiny. Matetika dia misy ny fahafahana mampiaraka feo amin'ny feoo sy ny fampiasana feo samihafa.
Jereo ny rindrambaiko malaza indrindra eto amin'ity faritra ity.
Ny Clown Fish dia mpamoaka feo maimaim-poana ho an'ny Skype, nomena anarana avy amin'ny trondro loko mampihomehy. Ny Clownfish, na dia tsotra aza ny fahitàny, dia manana karazana endri-javatra izay misy amin'ny vahaolana matihanina hafa. Azonao atao ny mifidy timbres efa vita na manitsy, manova azy ireo amin'ny tanana. Misy ihany koa ny fiantraikany tsara toy ny echo, reverb, sns.
Ny tsy fahampiana miharihary no mampifanaraka ny fampiharana amin'ny Skype. Amin'ny mpampiasa hafa ho an'ny fifandraisana amin'ny fampiasana ity fitaovana ity dia tsy mandeha ny asa.
Lesona: Ahoana no hanovana ny feo amin'ny Skype amin'ny fampiasana Clownfish
Scrumby dia mpandidy feo eo amin'ny solosainao. Ny Scramby dia manana anjara asa fanampiny, ary ny feo dia afaka ovaina amin'ny alalan'ny fisafidianana eo amin'ireo sehatry ny fananganana efa vita. Manova ny feonao amin'ny fampiasana Scrumby tsy hiasa.
Fa etsy ankilany, ny programa dia manohana ny asa amin'ny fampiharana rehetra, ho toy ny lalao na Skype. Nekena ny fangatahana, saingy misy fe-potoana fitsapana. Amin'ny ankapobeny, ity vahaolana ity dia mifanaraka amin'ireo mpampiasa tsy maotina. Ireo izay mila ny kalitao avo lenta sy ny asa fanampiny dia tokony hijery ny vahaolana manaraka ao amin'ny lisitra.
AV Voice Changer Diamond dia azo antsoina hoe iray amin'ireo tsara indrindra, raha tsy ny fandaharana tsara indrindra hanova ilay feo. Fomba mahafinaritra sy mahafa-po, ny fahafaha-manao tsara, ny asa maro hafa, ny fahafahana manatsara ny feon'ilay mikrôfo - izany rehetra izany dia ahafahanao manavaka ity vokatra ity amin'ny sisa.
Ny programa dia afaka manova ny feonao amin'ny lalao na ny mpanjifa mba hifandraisana. Ohatra, AV Voice Changer Diamond dia lavorary tahaka ny mpandidy feo ao CS: GO. Ny fampiharana dia hahatonga azy ho toy ny tovovavy, ary ny mpilalao dia tsy afaka ny hahatakatra fa ny tena izy dia mifandray amin'izy ireo. Na azonao atao ny manohina na mampifaly ny vahoaka amin'ny feo tsy mahazatra sy mahavariana feno vokany.
Ny tsy fitoviana dia ahitana ny ilana ny mividy ny programa, raha te hampiasa izany mandritra ny fotoana lava. Ankoatr'izay dia tsy hita koa ny Rosiana ny interface. Ny sisa dia diamondra marina eo amin'ny tsena ho an'ny vahaolana toy izany.
Lesona: Ahoana ny fomba hanovana ny feonao ao amin'ny CS: GO
Momba ny "Funny Voice" dia tsy afaka milaza betsaka. Fandaharana tena tsotra. Ny fanaraha-maso rehetra dia singa miovaova. Mampalahelo fa tsy afaka mampita fahitalavitra hafa ho an'ny fifandraisana feo ny fampiharana. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mamadika ny stereo mixer ianao, izay ao amin'ny rindrankajy maoderina indrindra.
Plus Funny Voice dia maimaim-poana ary ny fahafahana miditra amin'ny teny Rosiana.
Voix changer Voxal
Sarotra ny mahita ny kalitao avo lenta, nefa miaraka amin'izay ihany koa ny fandaharana fandikana feo. Na izany aza, ny iray amin'ireo dia ny Voxal Voice Changer - fitaovana iray izay afaka mifaninana amin'ireo mpifaneraserany mifototra amin'ny isan'ny asa sy ny sehatra, fa miaraka amin'izay ihany koa dia malalaka tanteraka amin'ny fampiasana ara-barotra.
Azonao atao ny maka ny programa maimaim-poana ary ampiasao izany araka izay tianao. Ho tianao ny fanatsarana toy ny fihenan'ny feo sy ny fahafahana manoratra ny feo niovao. Safidy tsara ho an'ny vahaolana karama.
Free Fake Voice dia mitovy amin'ny Funny Voice. Na izany aza dia manana andraikitra roa fanampiny izy (fampiharana ny vokatra, fihenam-bava) ary ahafahanao mamoaka mora foana ny fampiharana izay miasa amin'ny feo.
Ny tsy fitoviana dia ny tsy fisian'ny fandikan-teny amin'ny fiteny Rosiana.
MorphVox Junior dia andian-dahatsoratra amin'ny fandikana ny feo amin'ny Morphproox Pro. Ny Junior dia manana fako miovaova amin'ny alàlan'ny dikan-teny maimaim-poana, saingy tena maimaim-poana izany. Misy safidy 3 azafady. Misy ihany koa ny fahafaha-milalao karazana feo samihafa sy fihenan'ny feo.
Azontsika atao ny milaza fa MorphVox Junior dia dokambarotra ho an'ny MorphVox Pro. Tokony hanandrana ny dikan-teny taloha ianao farafaharatsiny noho ny fisian'ny fotoam-pitsapana.
Ny farany sy iray amin'ireo fandaharana tsara indrindra amin'ity fijery ity dia ny Morfox Pro. Ny fisehoan-javatra tsotra dia tsy mamela anao ho takatra avy hatrany fa ity dia tena lehibe eo amin'ny fitaovana rindrambaiko amin'ity sehatra ity. MorphVox Pro dia ahafahanao manova ny feonao raha mihazona ny feony voajanahary. Ankoatr'izany, misy ny fiantraikany be dia be, ny fahafahana mampiditra ny feo manomboka, ny fihenan'ny feo, ny fandrenesana feo amin'ny feo, ny feo, ary ny feo.
Ny Morphology MorphVox Pro dia maneho tsara ny tenany ho toy ny fanovàna feo ho an'ny Skype sy ny vokatra mitovy amin'izany. Mampalahelo fa aloa io fampiharana io, saingy misy fe-potoana 7 andro.
Download MorphFox Pro
Ny fandaharan'asa fanovozam-peo amin'ny Skype, TeamSpeak, Discord sy ireo fampiharana hafa mitovy amin'izany dia hamela anao hanana fahafinaretana. Ao anatin'ity famerenana ity, ny 8 amin'ireo vahaolana tsara indrindra rindrambaiko amin'ny fanovana ny feo amin'ny solosaina misy amin'izao fotoana izao dia natolotra.
Raha fantatrao kokoa ny fandaharana - soraty eo amin'ny fanehoan-kevitra izany. Misaotra anao amin'ny sainao!